BHZD series Explosion-proof aeronautic flashing lamp
1. Isetyenziswa kakhulu kuphononongo lwe-oyile, ukusulungekiswa kwe-oyile, iikhemikhali, umkhosi kunye nezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile angaphesheya kweelwandle, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye iindawo njengenjongo yesilumkiso;
2. Isetyenziswa kwizakhiwo eziphakamileyo, iiplatifomu zokugaya, izixhobo ezide kunye neendawo zokugcina ioli ezide kwisakhiwo, imiyalelo yokusetyenziswa kwemiqobo ye-aviation.
3. Ifanele indawo yerhasi eqhumayo kwindawo 1, indawo yesi-2;
4. Umoya oqhumayo: iklasi ⅡA,ⅡB, ⅡC;
5. Ifanele indawo yothuli oluvuthayo kwindawo ye-22, 21;
6. Ifanelekile kwiimfuno eziphakamileyo zokukhusela, iindawo ezimanzi.
1. I-enclosure ibunjwe ngamandla aphezulu e-aluminium alloy ngexesha elinye.Umphandle wayo utshize ngeplastiki ngoxinzelelo oluphezulu lwe-static emva kokudubula kuqhume ngesantya esiphezulu.Kukho iingenelo ezithile kwindawo ebiyelweyo: ubume obuqinileyo, izinto ezixineneyo eziphezulu, ukomelela okukhulu, imisebenzi emihle yobungqina bokudubula.Inoncamelelo olomeleleyo lweplastiki yomgubo kunye nokusebenza okukhulu kwe-anticorrosive.Umphandle ucocekile kwaye umhle;
2. Ukubunjwa kwe-casting, i-compact structure, inkangeleko enhle;
3. Ukusebenzisa ukukhanya okuphezulu kwesibane se-LED, ngokusetyenziswa okuphantsi, ubomi benkonzo ende (iiyure eziyi-100,000), i-mianweihu characteristic;
4. Ukutshintsha okuzenzekelayo kokulawula ukukhanya kunokuvula xa ebusuku okanye imeko yenkungu eninzi, icime emini;
5. Iguqula ibhalbhu ngokuzenzekelayo, impazamo yokuhlola kunye ne-alam ngokuzenzekelayo, xa ibhalbhu yesithandathu isebenza, isixokelelwano samaza esithwala siya kungqubeka kwaye sikhuphe isignali ye-alam yesandi kunye ne-optic ukukhuthaza ukutshintsha ibhalbhu entsha;
6. I-Wiring nge-tube yensimbi yekhebula.
7. Iyakwazi ukufanisa iipaneli zelanga zepaneli zelanga eziphezulu zokusebenza, ziya kukhanya ukuguqulwa zibe ngumbane kwaye akukho ngaphantsi kokukhanya kwe-10lx imeko yonke iyakwazi ukuguqulwa okuqhelekileyo, nokuba yi-YinYuTian inokuguqulwa okuqhelekileyo kunye nokugcinwa, Olu fakelo lweplate kufuneka lunikwe ingqalelo xa izinto zihamba. ngaphandle kwe-sunscreen, ukufakela ukukhanya kwelanga, kwaye kufuneka kulungiswe kwaye kuthembeke;Ibhokisi yokulawula equlethe iibhetri zokugcina amandla, ukusebenza okuphezulu akukho nkcazo yememori ye-12V / 0.7 Ah, kwaye ixhotyiswe ngesiphaluka solawulo logcino, yenza izibane zokuthintela ekuguquleni ukukhanya kwemini kumandla ombane emva kokukhutshwa kwezibane kunye nezibane ezikhanyiswe ukuya kwiiyure ze-15 ngaphezulu. , ukwanelisa ngokupheleleyo imfuneko yokusetyenziswa kweendawo ezahlukeneyo, Qaphela ezintathu ibhokisi yokulawula ubungqina bobungqina xa ufakelo, nceda ubekwe kwinqanaba;
1. Ngokuhambelana neenkcukacha zentsingiselo yemigaqo kunye nemimiselo yokukhetha enye enye, kunye neenkcazo zemodeli emva kokunyuka kwamanqaku obungqina bokuqhuma.Intetho ebambekayo yile: "imodeli yemveliso - ikhowudi echazayo + uphawu lobungqina bokudubula + ubungakanani bomyalelo".Okufana nemfuno yezibane ezithintela uthuli zenqwelomoya ezithintela ukuqhuma, inani lee-odolo ezingama-20, iinkcukacha zemodeli yemveliso: “Imodeli: BHZD +IiNkcazo: Ex tD A21 IP66 T80 ℃.
2. Ukuba kukho iimfuno ezikhethekileyo, makuboniswe njengokuodola.
Ngaphambili: PBb series Positive uxinzelelo uqhushumbo-ubungqina ibhodi yokuhambisa ibhodi
Okulandelayo: Uthotho lwe-BS51 Uqhushumbo-ubungqina obujolise kwitotshi
Izibane zobungqina obuqhumayo
Ubungqina bokuqhuma izibane zeLed
Ubungqina boKuqhushumba kweLed Work Lights
Iimpawu zeMpembelelo yoMfanekiso 1. Ixesha lokusebenza lide, ukukhanya okukhanyayo kunye nokukhanya okusebenzayo kwexesha eliqhubekayo lokusebenza kwiiyure ze-10, iiyure ze-20 okanye ngaphezulu.2. Iklasi yokhuseleko lwe-Enclosure IP66, ukuqinisekisa ukuba izibane kwiindidi zeemeko ezinzima kunye nokusetyenziswa okuthembekileyo.3. Iqokobhe ukusetyenziswa kwezixhobo zeplastiki bullet-proof, amandla aphezulu, ukumelana impembelelo elungileyo.4. Ubunzima bokukhanya, bunokubanjwa ngesandla, ukuxhoma, i-buckle kunye nezinye iindlela eziphathekayo, ngelixa i-adsorption magnetic, kulula ukuyisebenzisa.5. Umsebenzisi-friendly batt...
FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Iimpawu zomlilo ezingxamisekileyo izibane...
Iimpawu zeMpembelelo yoMfanekiso 1. Iqokobhe le-aluminiyam ye-alloy die-casting, umphezulu we-high-pressure electrostatic spray.2. Ukucwangciswa kobomi obude ukukhanya okuphezulu komthombo wokukhanya kwe-LED, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ukukhanya okuphezulu, ukuhlangabezana ngokufanelekileyo nokugcinwa kwamandla, iimfuno zokusingqongileyo 3. Ipakethi yebhetri ye-Ni-MH eyakhelwe-ngaphakathi, umsebenzi oqhelekileyo wokutshaja ngokuzenzekelayo, amandla. ukusilela kunokuba lunikezelo lombane olungxamisekileyo imizuzu engama-90.4. Ngoyilo olukhethekileyo lwesekethe ekhuselekileyo ngaphakathi...
I-BAD63-Uluhlu olubonisa ukuqhuma okuphezulu ukusebenza kakuhle ...
Iimpawu zeMpembelelo yoMfanekiso 1. Iqokobhe leAluminiyam yeAluminiyam yokuphosa, umphezulu wokutshiza we-electrostatic, imbonakalo entle.2. Uyilo olunelungelo elilodwa lomenzi wesakhiwo somngxuma omninzi, igumbi lonikezelo lwamandla, indawo yomthombo wokukhanya kunye nomngxuma wocingo ozimeleyo ozimeleyo kumngxuma ngamnye.3. Ukusetyenziswa kweglasi yeborosilicate isigqubuthelo esicacileyo okanye i-polycarbonate transparent cover, ukusebenza kobungqina bokudubula kunye nokusebenza kombane kunye nokuthembekileyo.4. Ukumelana ne-corrosion ephezulu yensimbi engenasici eveziweyo ye-fasteners.5. Ukhuseleko oluselubala...
FCT95 series Explosion-proof yokuhlola isibane
Iimpawu zeMpembelelo yeModeli 1. I-casing yangaphandle yenziwe ngezinto zeplastiki zobunjineli, isigqubuthelo esicacileyo sifakwe inaliti eyenziwe nge-polycarbonate, kunye nomthombo wokukhanya we-LED wakhiwe, obunzima obunzima kwaye kulula ukuyisebenzisa.2. I-enclosure inezinga le-IP66 ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo kwesibane phantsi kwazo zonke iintlobo zeemeko ezinzima.3. Isiphelo sangaphambili sesibane sinikezelwa ngekhonkco yensimbi engenasici enokuthi ijikeleze i-360 °.4. Ikhaphukhaphu, ubunzima obukhanyayo, obuphathekayo, obujingayo kunye...
Iimpawu zeMizekeliso yeMizekeliso 1. Izibane zesitalato zenziwe ngeemodyuli zelanga, izilawuli zezibane zesitalato ezikrelekrele, (ezingcwatyiweyo) iibhetri ezingakhathalelwanga, izibane ezingaqhushumbayo ze-BAD63, iipali zezibane kunye nezinye izinto.Iimodyuli zelanga zihlala ziyi-DC12V, i-DC24 iipleyiti ze-silicon ze-monocrystalline okanye iiseli ze-silicon ze-polycrystalline zelanga kuchungechunge kunye nokuhambelana.Zivalwe ngokuqinileyo ngeglasi epholileyo, i-EVA kunye ne-TPT.Isakhelo se-aluminiyam ye-alloy sifakwe ngeenxa zonke kumda, onomoya onamandla kunye nesichotho ...